ဇနီးသည် ဆိုတာ ယောက်ျား ကို ငရဲလည်း ပို့နိုင် သလို နိဗ္ဗာန်ကိုလည်း ပို့နိုင်တယ်ဆိုတာ ဒီလိုပါ – Zartiman
Zar Ti Man | July 25, 2020 | Knowledge | No Comments
မင်းရာဇာတို့ အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စမှာ သူ့မိန်းမက အားရှိခေါင်းသွားမလျှော်တော့ပဲ ….ကိုယ့်ယောက်ျားကို ကြပ်ကြပ်မတ်မတ်ထိန်းလိုက် မယ် ဆိုရင် အိမ်ဖော်ကလေးမလေး ပန်းကောင်းအညွန့်ကျိုးနစ်နာတာက လွှဲပီး သူလဲနောင်တချိန် အိမ်ထောင်တစ်ခု ထူထောင်နိုင်မယ် အားလုံးလဲ တိတ်တဆိတ်ပီးသွားပါလိမ့်မယ်။နောက်တနည်းအနေနဲ့ မင်းရာဇာမိန်းမက ဒီလို ဖောက်ပြန်တဲ့ ယောက်ျားကို မသတီတော့ လို့ ငါ့ခြေထောက်ပေါ် ငါရပ်တည်မယ် မပေါင်းတော့ဘူးဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ရင်လဲ နောင်တချိန်သူ့သမီးလေးမှာ အဖေဖောက်ပြန်လို့ ငါ့မိဘတွေ လမ်းခွဲရတယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဏ်ရာ ကလွှဲရင် ပုံမှန်ဘဝမှာပဲ ရှိနေပါလိမ့်မယ် ။
ဒီကနေ့ မင်းရာဇာမိန်းမ ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းကို ကြည့်ပီး ကျနော်တော်တော်တုန်လှုပ်သွားသလို ငါ့မိသားစုမှာလဲ ဒီလိုလူမျိုးမပါဖို့ ဆုတောင်းမိပါတယ်။ယောက်ျား တစ်ယောက် ဖောက်ပြန်တယ် ဆိုတာ ဆန်းကြယ်တဲ့ ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ အိမ်ဖော်နဲ့ ဖောက်ပြန်တယ်။ အိမ်မှာလာနေတဲ့ မိန်းမဘက်ကအမျိုးနဲ့ ဖောက်ပြန်တယ်။ မိန်းမရဲ့ သူငယ်ချင်းနဲ့ ဖောက်ပြန်တယ်။အလုပ်ထဲက လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် နဲ့ ဖောက်ပြန်တယ်။ အပြင်မှာ ဖောက်ပြန်တက်ကြတယ်။ ဒါတွေက ကျနော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းကြားမှာ မကြာခဏကြား နေကြရတဲ့ကိစ္စတွေပါ။ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုထဲက လူတွင်ပါလို့ နွားကို ကျားကိုက်တာပါ။
စည်းဖောက် တယ် စည်းပေါက်တယ်ဆိုတာကလဲ အတွင်းလူက ဖောက်လို့ ပေါက်လို့ စည်းပျက်ကြရတာပါ။တစ်ဖက်က မြူစွယ်လို့ ဖျား ယောင်းလို့ သိမ်းသွင်းလို့ ဖြစ်ကြတယ်ဆိုရင်တောင် ကိုယ့်လူမပါရင် လူအများနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာ သင့်ကို လက်ခံဖို့ ချစ်ခင်ဖို့ ဆိုတာ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်- မလိုအပ်ဘူးထင်ပြီး သင့် ရဲ့ဆက်ဆံပုံ ဆက်ဆံနည်း လွဲမှားသွားခဲ့ရင်တော့ သင် မိတ်ပျက်ပါပြီ- ဒါကြောင့် ဒီ ဗီဒီယိုလေးကိုသာ ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်လိုက်ပါ အထမမြောက်တဲ့ ကိစ္စတွေပါ။ ဒဿ ဂီရီနောက် မယ်သီတာ ပါသွားတာက မယ်သီတာ ဘက်က မဖောက်ပြန်ဘူးဆိုသိတိုင် လက္ခဏာတားခဲ့တဲ့ စည်းကို မယ်သီတာက စဖောက်ပီး အပြင်ထွက်လို့သာ။
သူများနောက်ကိုပါရတာပါ။ လောကမှာ ကိုယ်လူ ကိုယ်နိုင်အောင်မထိန်းနိုင်တောင် ကိုယ့်လူ မဖောက်ပြန်သ၍ ကိုယ့်ဘက်ကလူ စည်း မဖောက်သရွေ့ ဖောက်ပြန်မှုဆိုတာ အထမမြောက်ပါဘူး။ကိုယ့်လူကိုယ်ထိန်းမနိုင်တော့ဘူး တားမရတော့ဘူးဆိုတဲ့ နေအထား ရောက် လာပါပီတဲ့ ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲလို့ စဉ်းစားကြတဲ့အခါ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အမြော်အမြင် ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်စွမ်း သည်းခံနိုင်စွမ်း ဆုံးဖြတ် နိုင်စွမ်းတွေက ဒီနေရာမှာ အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။တလင်တမယားဥပဒေနဲ့ ယောက်ျားကို ထောင်ထဲ ထည့်မလား? သည်းခံပီး ဆက် ပေါင်းမလား? ကိုယ့်ဘဝကို ကိုယ့်ဘာသာရပ်တည်မလား? အစရှိတဲ့ ရွေးချယ်စရာတွေရှိတဲ့အထဲက ။
ဒီကနေ့ မင်းရာဇာမိန်းမ ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ လမ်းက အဆိုးဆုံးနဲ့ပတ်ဝန်း ကျင် ကို ဒုက္ခအပေးဆုံး လမ်းကြောင်းဖြစ်သွားပါတယ်။သူ့အနေနဲ့ အိမ်ဖော်နဲ့ ဖောက်ပြန်နေတဲ့ ယောက်ျားကို တစ်လင်တမယားဥပဒေနဲ့ တိုင်ခဲ့ရင် သူ့ယောက်ျား အဖမ်းခံရမယ် ထောင်ကျမယ်။ ဒါဆို သူ ကတော့ ဖောက်ပြန်တဲ့ာက်ျား ကို ထောင်ထဲထည့်တဲ့ မိန်းမဖြစ်သွားမယ် သူ့သမီးလေးက ဖောက်ပြန်လို့ ထောင်ကျတဲ့ ဖအေရှိတယ်ဆို တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာရပ်တည်ဖို့ စိတ်ဒဏ်ရာရသွားမယ်။ဒီလောက်နဲ့ ပီးသွားပီ နစ်နာသူက မင်းရာဇာနဲ့ သူ့ သမီး လေး ၂ ယောက်ပဲရှိပါမယ်။ သူ့အနေ နဲ့ ဒီကိစ္စကို သည်းခံမယ် အိမ်ဖော်ကလေးမလေးကို သူ့မိဘအိမ်ပို့ပီး လူခွဲထားလိုက်မယ်။
သူလဲလောင်မြိုက် ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလဲ အကုန်လောင်မြိုက်ပီး ဒုက္ခမီးတွင်းထဲ ဆွဲချသွားတဲ့ မိန်းမပါ။သူ့လင် မင်းရာဇာကတော့ ဖောက်ပြန် မှုအတွက်ခံရတယ်ဆိုပေမဲ့ အခုလို လူသိရှင်ကြားဖြစ်တဲ့ အခါမှာ အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်မှုကနေ သက်ငယ်မဒိန်းမှုငြင်းပန်းနှိပ်စက်မှု အစရှိတဲ့ ပြစ်မှုများစွာနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတော့ မှာ ဖြစ်ပါတယ်သူ့မိုက်ပြစ်သူခံရတယ် ဆိုပေမဲ့ အနေနီးတဲ့ သာမာန်အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်မှုက နေပီး ထောင်ထဲကထွက်လာရင်တောင် လောကအလည်မှာ လူဆက်လုပ် ဖို့ ရပ်တည်ရန်ခက်ခဲတဲ့ ဘဝတစ်ခုကိုရောက်အောင် ယောက်ျား လုပ်သူ့ကို သူတွန်းပို့လိုက်ပါပီ။ကိုယ့်အိမ်က ပြဿ နာကိုယ့်ဘာသာမရှင်းပဲ မိဘအိမ်အထိသယ်သွားပီး ။
အိမ်ဖော်ကလေးမခေါင်းကို တူနဲ့ထုလောက်အောင် မိဘတွေ အရှေ့မှာ ပြဿ နာရှာခဲ့တဲ့ သူ့လုပ်ရပ်ကြောင့် ဖအေခမြာ လက်ရှိအချုပ်ထဲ ရောက်နေပီးတော့ မကြာခင်ထောင်ကျရပါတော့မယ်။သူမွှေးတဲ့ မီးက သူ့အဖေကို လောင်သွားပါပီ။သမီးက အက်ဆစ်နဲ့ပတ်တယ် သမက် က မဒိန်းကောင် ယောက်ျားက နှိပ်စက်မှုနဲ့ ထောင်ထဲမှာ ဆိုတော့ ကျန်ရစ် ခဲ့မဲ့ မင်းရာဇာမိန်းမရဲ့ အမေဘဝက ပတ်ဝန်ကျင် လူ့အသိုင်း အဝိုင်းထဲမှာ ဘယ်လိုမှ ခေါင်းမော့ရင်ကော့နိုင်စရာမရှိတော့သလို မင်းရာဇာမိဘတွေလဲ ခုချိန်ဆို ရင်ထဲမှာ မီးတောက်နေကြပါပီ။ဒါက မင်းရာဇာ မိန်းမမွှေးတဲ့ မီးက သူ့အမေနဲ့ သူ့ယောက္ခမတွေ လောင်ကျွမ်းကုန်တာပါ။
တခါတည်းမှာပဲ ခံရတဲ့ အိမ်ဖော်ကလေးရဲ့ မိဘတွေဘက်ဆိုလဲ သောကမီးတွေ တောက်လောင်ကုန်ပါပီ။ အားလုံးသော ပတ်သတ်တဲ့လူ တွေ တစ်ယောက်မှ စိတ်မချမ်းသာရတော့ပါဘူး။သူတို့တင်ပဲလားဆိုတော့ ချုပ်ပေးတယ် ဆိုတဲ့ မင်းရာဇာရဲ့ မန်နေဂျာ ရခိုင်လေးဆိုတဲ့ သူ တို့အလုပ်သမားပါ ကြံရာပါအဖြစ်နဲ့ ဒီအမှု မှာ မလွှတ်မြောက်တော့ပါဘူး။သနား ဖို့ကောင်းတဲ့ အိမ်ဖော်ကောင်မလေးခမြာမှာလဲ ပြန် ကောင်းမယ် မကောင်းနိုင်ဘူးဆိုတာ မသေချာသေးသလို …ကံမကောင်းအကြောင်းမလှလို့ သေသွားခဲ့ရင် သူ့ဘဝအတွက် အမှန်တရားဆို တာကို သိသွားရှာမှာ မဟုတ်သလို ပြန် ကျန်းမာလာရင်လဲ ဒီအမှု့ကြီးကိုရင်ဆိုင်ပီးတဲ့ သကာလ ။
မဒိန်းကျင့်ခံခဲ့ရတဲ့မိန်းမ …..အက်ဆစ်နဲ့ အပက်ခံခဲ့ရတဲ့ မိန်းမဆိုတဲ့ စိတ်ဒဏ်ရာ လူဒဏ်ရာတွေနဲ့ ကျန်ရှိနေတဲ့ ဘဝကို ခက်ခဲစွာလျှောက် လှမ်းရတော့မှာပါ။ သူတို့နေတဲ့ နယ် မြို့လေးတွေရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အနေအထားအရ ဘယ်သူ့ သမီးကတော့ မင်းသားမင်းရာဇာအိမ်မှာ အ လုပ်လုပ်နေတယ် ဆိုတာ ….ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလဲ သိနေတဲ့ အပြင် ဒီနေ့လို တိုင်းကျော်ပြည်ကျော်ဖြစ်ကြလေတော့ ဘယ်လိုမှ ဖုံးဖိထား လို့မ ရလောက်တော့ပါဘူး။သူအနေနဲ့ ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လဲ ဖအေလဲထောင်ကျ ယောက်ျားလဲထောင်ကျ သူလဲထောင်ကျရမဲ့ အပြင် ….ယော က်ျားက သက်ငယ်မဒိန်းကောင် ဖအေကထောင်ထွက် သူကိုယ်တိုင်လဲ လူမ ဆန်တဲ့နှိပ်စက်မှုနဲ့ ထောင်ထွက်အနေနဲ့။
အပြင်ကိုပြန် ထွက်လာတဲ့အခါ ကျန်ရှိတဲ့ဘဝကို လူတကာတံထွေးခွက်ထဲကနေ ဖြတ်သန်းရမဲ့အပြင် ထောင်ထဲမှာလဲ အနည်းဆုံးတော့ ဝင်ဝင်ချင်း အထဲကလူတွေ ဝိုင်းထုတဲ့ဒဏ်ကို ခံရအုံးမှာပါ။ဒီအဖြစ်အပျက်တခုလုံးမှာ သနားစရာအကောင်းဆုံး ကတော့ လူမမယ်စာ မမြောက်သေးတဲ့ မင်းရာဇာသမီးလေးပါ။ သူအနေနဲ့ ဒီအချိန်မှာ ဘာမှ မသိသေးပေမဲ့ သူကြီးပြင်းအရွယ်ရောက်လာမဲ့ အနာဂတ်မှာ ဖိုးအေက သူများကို နှိပ်စက်လို့ ထောင်ကျတဲ့ ထောင်ထွက် ဖအေက သက်ငယ်မဒိန်းကောင် မအေကလူမဆန်တဲ့ သူများသားသမီးကို အက်စစ်နဲ့ပက်တဲ့ ထောင်ထွက်မိန်းမဆိုတဲ့ ဘဝကြီးကို သူရွေးချယ်စရာမရှိပဲ ဖြတ်သန်းရပါတော့မယ်။
မင်းရာဇာ သမီးဆိုပီး သိလိုက်တာနဲ့ ဟင်ဆိုပီး နှာခေါင်းရှုံကြမဲ့ ကွယ်တာနဲ့ သူ့အဖေနဲ့ အမေကေ လဆိုပီး အတင်းပြောကြမဲ့ ကျောင်း တက်လို့ ကလေးအချင်းချင်းယှဉ်ရင်တောင် တန်းတူရပ်တည်နိုင်တော့မှာ မဟုတ်တော့တဲ့ အခြေအနေရောက် အောင် သူ့အမေက တွန်းပို့ခဲ့ ပါပီ။မင်းရာဇာမိန်းမမွှေးတဲ့ မီးဟာ အဖေအမေ ယောက္ခမ ယောက်ျား သူ့သမီး သူ့အလုပ်သမားတွေနဲ့ သူကိုယ်တိုင် လူ့လောက လူ့အသိုင်း အဝိုင်းမှာ ဆက်လက်ရပ်တည်လို့မရအောင်ကို ဘဝပေါင်းများစွာကို ဖျက်စီးလိုက်တာပါ။ ငါ့ဆီလာလုပ်နေတဲ့ အလုပ်သမားနဲ့ ငါဆီလာနေ တဲ့ အိမ်ဖော် ငါလုပ်ရင်ခံရမယ် ငါလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ လူတစ်ဖက်သားအပေါ် နိုင်ထပ်စီးနင်းနဲ့။
မတော်မတရား အနိုင်ကျင့်ရာက အရှိန်မထိန်း နိုင်တော့ပဲ မိမိကိုယ်တိုင်ရော မိသားစုလိုက်ကိုပါ ဒုက္ခတွင်းကိုဆွဲသွင်းခဲ့တဲ့ ဒီမိန်းမလိုမျိုး လူ တွေ မိမိပတ်ဝန်းကျင် မိမိအသိုင်းအဝိုင်းကြားမှာ မပေါ်ပေါက်ပါစေနဲ့ မိသားစုအတွင်းမှာပြဿနာရှိရင်လဲ ခေါင်းအေးအေးထားပီး အ ကောင်းဆုံးအဖြေရှာနိုင်ကြပါစေ ကံဆိုး တဲ့ အိမ်ဖော်မလေးလိုဘဝမျိုးတွေလဲ ပပျောက်ပါစေလို့လဲ ဆုတောင်း မိပါတယ်။
မငျးရာဇာတို့ အိမျထောငျရေးကိစ်စမှာ သူ့မိနျးမက အားရှိခေါငျးသှားမလြှျောတော့ပဲ ….ကိုယျ့ယောကျြားကို ကွပျကွပျမတျမတျထိနျးလိုကျ မယျ ဆိုရငျ အိမျဖျောကလေးမလေး ပနျးကောငျးအညှနျ့ကြိုးနဈနာတာက လှဲပီး သူလဲနောငျတခြိနျ အိမျထောငျတဈခု ထူထောငျနိုငျမယျ အားလုံးလဲ တိတျတဆိတျပီးသှားပါလိမျ့မယျ။နောကျတနညျးအနနေဲ့ မငျးရာဇာမိနျးမက ဒီလို ဖောကျပွနျတဲ့ ယောကျြားကို မသတီတော့ လို့ ငါ့ခွထေောကျပျေါ ငါရပျတညျမယျ မပေါငျးတော့ဘူးဆိုတဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြခလြိုကျရငျလဲ နောငျတခြိနျသူ့သမီးလေးမှာ အဖဖေောကျပွနျလို့ ငါ့မိဘတှေ လမျးခှဲရတယျဆိုတဲ့ စိတျဏျရာ ကလှဲရငျ ပုံမှနျဘဝမှာပဲ ရှိနပေါလိမျ့မယျ ။
ဒီကနေ့ မငျးရာဇာမိနျးမ ရှေးခယျြခဲ့တဲ့လမျးကွောငျးကို ကွညျ့ပီး ကနြျောတျောတျောတုနျလှုပျသှားသလို ငါ့မိသားစုမှာလဲ ဒီလိုလူမြိုးမပါဖို့ ဆုတောငျးမိပါတယျ။ယောကျြား တဈယောကျ ဖောကျပွနျတယျ ဆိုတာ ဆနျးကွယျတဲ့ ကိစ်စမဟုတျပါဘူး။ အိမျဖျောနဲ့ ဖောကျပွနျတယျ။ အိမျမှာလာနတေဲ့ မိနျးမဘကျကအမြိုးနဲ့ ဖောကျပွနျတယျ။ မိနျးမရဲ့ သူငယျခငျြးနဲ့ ဖောကျပွနျတယျ။အလုပျထဲက လုပျဖျောကိုငျဘကျ နဲ့ ဖောကျပွနျတယျ။ အပွငျမှာ ဖောကျပွနျတကျကွတယျ။ ဒါတှကေ ကနြျောတို့ ပတျဝနျးကငျြမှာ လူ့အသိုငျးအဝိုငျးကွားမှာ မကွာခဏကွား နကွေရတဲ့ကိစ်စတှပေါ။ဖောကျပွနျတယျဆိုထဲက လူတှငျပါလို့ နှားကို ကြားကိုကျတာပါ။
စညျးဖောကျ တယျ စညျးပေါကျတယျဆိုတာကလဲ အတှငျးလူက ဖောကျလို့ ပေါကျလို့ စညျးပကျြကွရတာပါ။တဈဖကျက မွူစှယျလို့ ဖြား ယောငျးလို့ သိမျးသှငျးလို့ ဖွဈကွတယျဆိုရငျတောငျ ကိုယျ့လူမပါရငျ လူအမြားနဲ့ ဆကျဆံတဲ့နရောမှာ သငျ့ကို လကျခံဖို့ ခဈြခငျဖို့ ဆိုတာ အလှနျအရေးကွီးပါတယျ- မလိုအပျဘူးထငျပွီး သငျ့ ရဲ့ဆကျဆံပုံ ဆကျဆံနညျး လှဲမှားသှားခဲ့ရငျတော့ သငျ မိတျပကျြပါပွီ- ဒါကွောငျ့ ဒီ ဗီဒီယိုလေးကိုသာ ကွညျ့ဖွဈအောငျကွညျ့လိုကျပါ အထမမွောကျတဲ့ ကိစ်စတှပေါ။ ဒဿ ဂီရီနောကျ မယျသီတာ ပါသှားတာက မယျသီတာ ဘကျက မဖောကျပွနျဘူးဆိုသိတိုငျ လက်ခဏာတားခဲ့တဲ့ စညျးကို မယျသီတာက စဖောကျပီး အပွငျထှကျလို့သာ။
သူမြားနောကျကိုပါရတာပါ။ လောကမှာ ကိုယျလူ ကိုယျနိုငျအောငျမထိနျးနိုငျတောငျ ကိုယျ့လူ မဖောကျပွနျသ၍ ကိုယျ့ဘကျကလူ စညျး မဖောကျသရှေ့ ဖောကျပွနျမှုဆိုတာ အထမမွောကျပါဘူး။ကိုယျ့လူကိုယျထိနျးမနိုငျတော့ဘူး တားမရတော့ဘူးဆိုတဲ့ နအေထား ရောကျ လာပါပီတဲ့ ဘာဆကျလုပျကွမလဲလို့ စဉျးစားကွတဲ့အခါ အမြိုးသမီးတှရေဲ့ အမွျောအမွငျ ဝဖေနျပိုငျးခွားနိုငျစှမျး သညျးခံနိုငျစှမျး ဆုံးဖွတျ နိုငျစှမျးတှကေ ဒီနရောမှာ အရမျးအရေးကွီးပါတယျ။တလငျတမယားဥပဒနေဲ့ ယောကျြားကို ထောငျထဲ ထညျ့မလား? သညျးခံပီး ဆကျ ပေါငျးမလား? ကိုယျ့ဘဝကို ကိုယျ့ဘာသာရပျတညျမလား? အစရှိတဲ့ ရှေးခယျြစရာတှရှေိတဲ့အထဲက ။
ဒီကနေ့ မငျးရာဇာမိနျးမ ရှေးခယျြခဲ့တဲ့ လမျးက အဆိုးဆုံးနဲ့ပတျဝနျး ကငျြ ကို ဒုက်ခအပေးဆုံး လမျးကွောငျးဖွဈသှားပါတယျ။သူ့အနနေဲ့ အိမျဖျောနဲ့ ဖောကျပွနျနတေဲ့ ယောကျြားကို တဈလငျတမယားဥပဒနေဲ့ တိုငျခဲ့ရငျ သူ့ယောကျြား အဖမျးခံရမယျ ထောငျကမြယျ။ ဒါဆို သူ ကတော့ ဖောကျပွနျတဲ့ာကျြား ကို ထောငျထဲထညျ့တဲ့ မိနျးမဖွဈသှားမယျ သူ့သမီးလေးက ဖောကျပွနျလို့ ထောငျကတြဲ့ ဖအရှေိတယျဆို တဲ့ ပတျဝနျးကငျြမှာရပျတညျဖို့ စိတျဒဏျရာရသှားမယျ။ဒီလောကျနဲ့ ပီးသှားပီ နဈနာသူက မငျးရာဇာနဲ့ သူ့ သမီး လေး ၂ ယောကျပဲရှိပါမယျ။ သူ့အနေ နဲ့ ဒီကိစ်စကို သညျးခံမယျ အိမျဖျောကလေးမလေးကို သူ့မိဘအိမျပို့ပီး လူခှဲထားလိုကျမယျ။
သူလဲလောငျမွိုကျ ပတျဝနျးကငျြကိုလဲ အကုနျလောငျမွိုကျပီး ဒုက်ခမီးတှငျးထဲ ဆှဲခသြှားတဲ့ မိနျးမပါ။သူ့လငျ မငျးရာဇာကတော့ ဖောကျပွနျ မှုအတှကျခံရတယျဆိုပမေဲ့ အခုလို လူသိရှငျကွားဖွဈတဲ့ အခါမှာ အိမျထောငျရေးဖောကျပွနျမှုကနေ သကျငယျမဒိနျးမှုငွငျးပနျးနှိပျစကျမှု အစရှိတဲ့ ပွဈမှုမြားစှာနဲ့ ရငျဆိုငျရတော့ မှာ ဖွဈပါတယျသူ့မိုကျပွဈသူခံရတယျ ဆိုပမေဲ့ အနနေီးတဲ့ သာမာနျအိမျထောငျရေး ဖောကျပွနျမှုက နပေီး ထောငျထဲကထှကျလာရငျတောငျ လောကအလညျမှာ လူဆကျလုပျ ဖို့ ရပျတညျရနျခကျခဲတဲ့ ဘဝတဈခုကိုရောကျအောငျ ယောကျြား လုပျသူ့ကို သူတှနျးပို့လိုကျပါပီ။ကိုယျ့အိမျက ပွဿ နာကိုယျ့ဘာသာမရှငျးပဲ မိဘအိမျအထိသယျသှားပီး ။
အိမျဖျောကလေးမခေါငျးကို တူနဲ့ထုလောကျအောငျ မိဘတှေ အရှမှေ့ာ ပွဿ နာရှာခဲ့တဲ့ သူ့လုပျရပျကွောငျ့ ဖအခေမွာ လကျရှိအခြုပျထဲ ရောကျနပေီးတော့ မကွာခငျထောငျကရြပါတော့မယျ။သူမှေးတဲ့ မီးက သူ့အဖကေို လောငျသှားပါပီ။သမီးက အကျဆဈနဲ့ပတျတယျ သမကျ က မဒိနျးကောငျ ယောကျြားက နှိပျစကျမှုနဲ့ ထောငျထဲမှာ ဆိုတော့ ကနျြရဈ ခဲ့မဲ့ မငျးရာဇာမိနျးမရဲ့ အမဘေဝက ပတျဝနျကငျြ လူ့အသိုငျး အဝိုငျးထဲမှာ ဘယျလိုမှ ခေါငျးမော့ရငျကော့နိုငျစရာမရှိတော့သလို မငျးရာဇာမိဘတှလေဲ ခုခြိနျဆို ရငျထဲမှာ မီးတောကျနကွေပါပီ။ဒါက မငျးရာဇာ မိနျးမမှေးတဲ့ မီးက သူ့အမနေဲ့ သူ့ယောက်ခမတှေ လောငျကြှမျးကုနျတာပါ။
တခါတညျးမှာပဲ ခံရတဲ့ အိမျဖျောကလေးရဲ့ မိဘတှဘေကျဆိုလဲ သောကမီးတှေ တောကျလောငျကုနျပါပီ။ အားလုံးသော ပတျသတျတဲ့လူ တှေ တဈယောကျမှ စိတျမခမျြးသာရတော့ပါဘူး။သူတို့တငျပဲလားဆိုတော့ ခြုပျပေးတယျ ဆိုတဲ့ မငျးရာဇာရဲ့ မနျနဂြော ရခိုငျလေးဆိုတဲ့ သူ တို့အလုပျသမားပါ ကွံရာပါအဖွဈနဲ့ ဒီအမှု မှာ မလှတျမွောကျတော့ပါဘူး။သနား ဖို့ကောငျးတဲ့ အိမျဖျောကောငျမလေးခမွာမှာလဲ ပွနျ ကောငျးမယျ မကောငျးနိုငျဘူးဆိုတာ မသခြောသေးသလို …ကံမကောငျးအကွောငျးမလှလို့ သသှေားခဲ့ရငျ သူ့ဘဝအတှကျ အမှနျတရားဆို တာကို သိသှားရှာမှာ မဟုတျသလို ပွနျ ကနျြးမာလာရငျလဲ ဒီအမှု့ကွီးကိုရငျဆိုငျပီးတဲ့ သကာလ ။
မဒိနျးကငျြ့ခံခဲ့ရတဲ့မိနျးမ …..အကျဆဈနဲ့ အပကျခံခဲ့ရတဲ့ မိနျးမဆိုတဲ့ စိတျဒဏျရာ လူဒဏျရာတှနေဲ့ ကနျြရှိနတေဲ့ ဘဝကို ခကျခဲစှာလြှောကျ လှမျးရတော့မှာပါ။ သူတို့နတေဲ့ နယျ မွို့လေးတှရေဲ့ ပတျဝနျးကငျြအနအေထားအရ ဘယျသူ့ သမီးကတော့ မငျးသားမငျးရာဇာအိမျမှာ အ လုပျလုပျနတေယျ ဆိုတာ ….ပတျဝနျးကငျြကိုလဲ သိနတေဲ့ အပွငျ ဒီနလေို့ တိုငျးကြျောပွညျကြျောဖွဈကွလတေော့ ဘယျလိုမှ ဖုံးဖိထား လို့မ ရလောကျတော့ပါဘူး။သူအနနေဲ့ ပွနျကွညျ့မယျဆိုရငျလဲ ဖအလေဲထောငျကြ ယောကျြားလဲထောငျကြ သူလဲထောငျကရြမဲ့ အပွငျ ….ယော ကျြားက သကျငယျမဒိနျးကောငျ ဖအကေထောငျထှကျ သူကိုယျတိုငျလဲ လူမ ဆနျတဲ့နှိပျစကျမှုနဲ့ ထောငျထှကျအနနေဲ့။
အပွငျကိုပွနျ ထှကျလာတဲ့အခါ ကနျြရှိတဲ့ဘဝကို လူတကာတံထှေးခှကျထဲကနေ ဖွတျသနျးရမဲ့အပွငျ ထောငျထဲမှာလဲ အနညျးဆုံးတော့ ဝငျဝငျခငျြး အထဲကလူတှေ ဝိုငျးထုတဲ့ဒဏျကို ခံရအုံးမှာပါ။ဒီအဖွဈအပကျြတခုလုံးမှာ သနားစရာအကောငျးဆုံး ကတော့ လူမမယျစာ မမွောကျသေးတဲ့ မငျးရာဇာသမီးလေးပါ။ သူအနနေဲ့ ဒီအခြိနျမှာ ဘာမှ မသိသေးပမေဲ့ သူကွီးပွငျးအရှယျရောကျလာမဲ့ အနာဂတျမှာ ဖိုးအကေ သူမြားကို နှိပျစကျလို့ ထောငျကတြဲ့ ထောငျထှကျ ဖအကေ သကျငယျမဒိနျးကောငျ မအကေလူမဆနျတဲ့ သူမြားသားသမီးကို အကျစဈနဲ့ပကျတဲ့ ထောငျထှကျမိနျးမဆိုတဲ့ ဘဝကွီးကို သူရှေးခယျြစရာမရှိပဲ ဖွတျသနျးရပါတော့မယျ။
မငျးရာဇာ သမီးဆိုပီး သိလိုကျတာနဲ့ ဟငျဆိုပီး နှာခေါငျးရှုံကွမဲ့ ကှယျတာနဲ့ သူ့အဖနေဲ့ အမကေေ လဆိုပီး အတငျးပွောကွမဲ့ ကြောငျး တကျလို့ ကလေးအခငျြးခငျြးယှဉျရငျတောငျ တနျးတူရပျတညျနိုငျတော့မှာ မဟုတျတော့တဲ့ အခွအေနရေောကျ အောငျ သူ့အမကေ တှနျးပို့ခဲ့ ပါပီ။မငျးရာဇာမိနျးမမှေးတဲ့ မီးဟာ အဖအေမေ ယောက်ခမ ယောကျြား သူ့သမီး သူ့အလုပျသမားတှနေဲ့ သူကိုယျတိုငျ လူ့လောက လူ့အသိုငျး အဝိုငျးမှာ ဆကျလကျရပျတညျလို့မရအောငျကို ဘဝပေါငျးမြားစှာကို ဖကျြစီးလိုကျတာပါ။ ငါ့ဆီလာလုပျနတေဲ့ အလုပျသမားနဲ့ ငါဆီလာနေ တဲ့ အိမျဖျော ငါလုပျရငျခံရမယျ ငါလုပျနိုငျတယျဆိုတဲ့ လူတဈဖကျသားအပျေါ နိုငျထပျစီးနငျးနဲ့။
မတျောမတရား အနိုငျကငျြ့ရာက အရှိနျမထိနျး နိုငျတော့ပဲ မိမိကိုယျတိုငျရော မိသားစုလိုကျကိုပါ ဒုက်ခတှငျးကိုဆှဲသှငျးခဲ့တဲ့ ဒီမိနျးမလိုမြိုး လူ တှေ မိမိပတျဝနျးကငျြ မိမိအသိုငျးအဝိုငျးကွားမှာ မပျေါပေါကျပါစနေဲ့ မိသားစုအတှငျးမှာပွဿနာရှိရငျလဲ ခေါငျးအေးအေးထားပီး အ ကောငျးဆုံးအဖွရှောနိုငျကွပါစေ ကံဆိုး တဲ့ အိမျဖျောမလေးလိုဘဝမြိုးတှလေဲ ပပြောကျပါစလေို့လဲ ဆုတောငျး မိပါတယျ။